Fanomezana sekoly tsy miankina: Nahoana no ilainy izany?
Fanomezana sekoly tsy miankina
Nahoana no mila mandray vola ny sekoly tsy miankina?
Ny ankamaroan'ny tsirairay dia mahafantatra fa ny fianarana any amin'ny sekoly tsy miankina dia midika matetika hoe fandoavam-bola, izay azo avy amin'ny vola an'arivony dolara ka mihoatra ny 60.000 dolara isan-taona. Mino izany na tsia, ny sekoly sasantsasany dia efa fantatra fa nahazo ny saram-pianarany isan-taona izay nahazo ny marika enina. Ary na dia eo aza ireo rotsa-bolan'ny vola midadasika be dia be, ny ankabeazan'ireo sekoly ireo dia mbola mandany vola amin'ny alalan'ny fandaharam-bola amin'ny Tahirim-bolan'ny Tahirim-bola, fanomezana fanomezana sy kapitalina. Nahoana no mbola mila manangom-bola hividianana ambony sy tsy mihoatra ny saram-pianarana ireo sekoly sarobidy toy itony? Mianara bebe kokoa momba ny anjara andraikitry ny fitadiavam-bola amin'ny sekoly tsy miankina ary ny fahasamihafana eo amin'ny ezaka fanangonam-bola.
Andao ho hitantsika ...
Nahoana no mangataka fanampiana ireo sekoly tsy miankina?
Fundraising. Heather Foley
Fantatrao ve fa any amin'ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina, ny sekoly dia tsy manararaotra ny sarany amin'ny fanabeazana mpianatra? Marina izany, ary matetika no antsoina hoe "ny banga" io fisehoan-javatra io, mampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny sarany amin'ny fianarana tsy miankina iray isaky ny mpianatra sy ny fandaniana amin'ny saram-pianarana tsirairay. Raha ny marina, ho an'ny andrim-panjakana maro, ny elanelana dia tena lehibe ka tsy hamoaka azy ireo haingana raha tsy noho ny fanomezana avy amin'ny mpikambana mahatoky eo anivon'ny sekoly. Ny sekoly tsy miankina dia sokajiana ho toy ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra ary mitazona ny antontan-taratasy 501C3 sahaza mba hiasana amin'izany. Azonao atao ny manamarina ny fahasalamana ara-bola avy amin'ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa, ​​anisan'izany ny sekoly tsy miankina indrindra, ao amin'ny tranonkala toa an'i Guidestar, izay ahafahanao mamerina mijery ny endrika taratasy 990 izay takiana tsy maintsy atao mba hahavitana isan-taona. Ny kaonty ao amin'ny Guidestar dia takiana, fa afaka mahazo ny fampahalalana fototra.
Ok, ny fampahalalana lehibe rehetra, fa mbola mety hanontany tena ianao hoe aiza ny vola lany ... ny marina dia lehibe ny haben'ny fitarihana mpianatra. Ny salan'isa sy ny karaman'ny mpiasa, izay matetika no mitaky ny ankamaroan'ny fandaniana amin'ny sekoly, ny fikojakojana ny trano sy ny asa, ny sakafo isan'andro, ary na ny fandaniana sakafo aza, indrindra fa any amin'ny sekolin'ny fiaramanidina dia tena lehibe ny vola. Ny Sekoly ihany koa dia nanatontosa ny saram-pianarany ho an'ireo fianakaviana izay tsy afaka manonitra ny fandaniana feno amin'ny antsoina hoe fanampiana ara-bola. Izany vola fanampiana izany dia natokana matetika amin'ny fikarakarana ny teti-bola, fa ny tena marina dia avy amin'ny fanafiana masina (misimisy kokoa amin'izany), izay vokatry ny fanomezana fanomezana.
Andeha hojerentsika ny fomba amam-panaovana fanomezana ary hahafantarana bebe kokoa ny fomba ahafahan'ny karazam-pandrosoana rehetra mahazo tombony amin'ny sekoly.
Fanangonam-bola: Tahiry isan-taona
Saika ny sekoly tsy miankina tsirairay dia manana tahiry isan-taona, izay tena lazain'ny anarana hoe: vola iray isan-taona izay omen'ny mpanelanelana ny sekoly (ray aman-dreny, mpampianatra, mpitandrim-pananana, alim-pianakaviana ary namana). Ny tahirim-bola isan-taona dia ampiasaina hanohanana ny fandaniana amin'ny fandaniana amin'ny sekoly. Ireo fanomezana ireo dia matetika fanomezana izay omen'ny olona ny taom-pianarana isan-taona, ary ampiasaina hanampiana ny "banga" izay iainan'ny ankamaroan'ny sekoly. Mino izany na tsia, fianarana any amin'ny sekoly tsy miankina maro - ary ny ankamaroan'ny sekoly tsy miankina (Manontany ny fahasamihafana eo amin'ny sekoly tsy miankina sy tsy miankina? ) - tsy manararaotra ny saran'ny fianarana. Tsy dia mahazatra loatra ny fandoavam-bola mba hijerena 60-80% fotsiny ny vidin'ny fanabeazana mpianatra iray, ary ny fanampiana ara-bola isan-taona any amin'ny sekoly tsy miankina dia mandrindra izany fahasamihafana izany.
Fanangonam-bozaka / Getty Images
Ny fampielezan-kevitry ny kapitalina dia fe-potoana voafaritra tsara ho an'ny ezaka fampiasam-bola. Mety afaka volana na taona maromaro izany, saingy manana daty farany sy tanjona farany izy amin'ny fananganana vola be. Ireo vola ireo dia natao manokana ho an'ny tetikasa manokana, toy ny fanorenana trano vaovao ao amin'ny toeram-ponenana, fanavaozana ny toeram-ponenana ao an-toeram-pianarana, na koa fampitomboana ny teti-bola fanampiana ara-bola mba ahafahan'ny fianakaviana maro manatrika ny sekoly.
Matetika ny fampielezan-kevitry ny kapitalina dia natao hanoloana ny filan'ny fiaraha-monina iray, toy ny trano fatoriana fanampiny ho an'ny sekoly ambaratonga ambony iray, na efitrano lehibe kokoa izay mamela ny sekoly manontolo hivory atsy ho atsy. Angamba ny sekoly dia mitady hanamboarana lalao hockey vaovao na hividy tany fanampiny mba ahafahany mampitombo ny isan'ny kianja filalaovana eny an-kianja. Ireo ezaka rehetra ireo dia afaka mandray soa avy amin'ny fanentanana an-drenivohitra. Bebe kokoa "
Ny famatsiam-bola fanafahana dia vola famatsiam-bola izay napetraky ny sekoly mba hananana ny fahafahana mivezivezy tsy tapaka ny renivola nampiasaina. Ny tanjona dia ny hampitombo ny vola mandritra ny fotoana amin'ny fampiasanao azy ary tsy manohina ny ankamaroan'ny izany. Ny tsara indrindra dia ny sekoly iray dia hampakatra manodidina ny 5% amin'ny fanafiana masina isan-taona, noho izany dia afaka mitombo hatrany ny fotoana.
Ny fanafiana mahery dia marika azo antoka fa ny faharetan'ny sekoly dia azo antoka. Maro ireo sekoly tsy miankina no manodidina ny taonjato iray na roa, raha tsy maharitra. Ireo mpanome hevitra mahatoky izay manohana ny fanampiana ny fanafiana masina dia miantoka fa ny harena ara-bola an'ny sekoly dia matanjaka. Mety hisy vokany tsara izany raha toa ka manana olana ara-bola amin'ny ho avy ny sekoly, fa manome fanampiana avy hatrany amin'ny alàlan'ny fanolorana kely izay handraisan'ny orinasa isan-taona.
Io vola io dia matetika ampiasaina hanampiana ireo sekoly hanatanteraka tetikasa manokana izay tsy mety ho tratry ny tahiry isan-taona na vola amin'ny teti-bola amin'ny ankapobeny. Ny volam-panafarana matetika dia manana fitsipika hentitra sy fitsipika hentitra momba ny fomba ampiasaina ny vola, ary ny lanjany dia azo atao isan-taona.
Ny vola tahirim-bola dia azo voafetra amin'ny fampiasana manokana, toy ny vatsim-pianarana na ny fananganana fakan-tsarimihetsika, fa ny vola fanampiana amin'ny Tahirim-bola isan-taona dia tsy miankina amin'ny tetikasa manokana. Ny fanangonam-bola ho an'ny fanafiana masina dia mety ho fanamby ho an'ny sekoly, satria ireo mpanome maro dia maniry ny hahita ny vola ampiasaina avy hatrany, fa ny fanomezam-pahasoavana an-tsitrapo dia natao halefa amin'ny vilany ho an'ny fampiasam-bola maharitra.
Fanangonam-bola amin'ny famatsiam-bola: fanomezana amin'ny ankizy
Maro ny sekoly manolotra izay fantatra amin'ny hoe Gift in Kind, izay fanomezana tsara na fanompoana tena izy, fa tsy fanomezana fanomezana ny sekoly ny vola mba hividianana entana na serivisy. Ohatra iray mety ho fianakaviana iray izay ny zanaka no mandray anjara amin'ny fandaharam-pampianarana teatra amin'ny sekoly tsy miankina ary te hanampy ny sekoly hanatsara ny rafi-pandehanana. Raha mividy ara-dalàna ny rafi-pandrefesana ny fianakaviana ary manome azy any amin'ny sekoly, dia heverina ho fanomezana tsara izany. Ny sekoly samihafa dia mety manana fitsipika momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fanomezana, ary raha manaiky sy manaiky izany izy ireo, dia aoka ho azo antoka ny manontany ny antsipiriany ao amin'ny Biraon'ny Fampandrosoana.
Ohatra, any amina sekoly iray niasako, raha nandray ny toro-hevitra izahay mba hisakafo an-dalambe tany an-toeran-dalamby ary nandoa izany tao amin'ny paosinay, dia afaka nanisa izany ho toy ny fanomezam-pahasoavana amin'ny hatsaram-panahy amin'ny tahiry isan-taona. Na izany aza, ireo sekoly hafa izay niasako dia tsy mihevitra fa ny vola fanomezana isan-taona.
Mety ho gaga ianao raha manolotra fanomezana ho tsara fanahy koa. Raha toa ny zavatra toy ny ordinatera, fitaovana fanatanjahantena, fitafiana, fitaovam-pampianarana sy rafi-pandehanana eny an-jaridaina, tahaka ny voalaza tetsy aloha momba ny departemantan'ny mpikaroka, dia toa mety ho azo itokisana, ny hafa dia mety tsara. Ohatra, fantatrao ve fa any an-tsekoly miaraka amin'ny programa fitarihana izay afaka manome maimaim-poana ny soavaly iray ianao? Marina izany, ny soavaly iray dia azo raisina ho fanomezana tsara fanahy.
Tsara foana ny mandamina fanomezana amin'ny hatsarana miaraka amin'ny sekoly alohan'ny handaniana, mba hahazoana antoka fa mila ilain'ilay sekoly ny fanomezam-pahasoavana raisinao. Ny zavatra farany tianao (na ny sekoly) dia ny hampisehoana fanomezana lehibe amin'ny hatsembohana (toy ny soavaly iray) izay tsy azony ampiasaina na ekena.
Fanangonam-bola amin'ny famolavolana
Ny fanomezam-pahasoavana novolavolaina dia fomba iray hiarahan'ny mpampianatra amin'ny fanomezana ny fanomezana fanomezana lehibe noho ny fidiram-bolany isan-taona. Miandrasa, inona? Ahoana no anaovany izany? Amin'ny ankapobeny, ny fanomezam-pahefana kasaina hatao dia heverina ho fanomezana manan-danja izay azo atao raha mbola velona ilay mpanome na aorian'ny fandehanany amin'ny ampahany amin'ny drafitra ara-bola sy / na famolavolan-tany. Mety ho sarotra be izany nefa mahafantatra fa ny birao fampandrosoana ho an'ny sekolinao dia tsy ho faly kokoa hanazava izany aminao ary hanampy anao haka ny fahafahana hahazoanao fotoana tsara omena anao. Ny fanomezam-pahasoavana novolavolaina dia azo atao amin'ny fampiasana vola, vola ary tahiry, trano, asa-tanana, drafitry ny fiantohana, ary hatramin'ny fisotroan-dronono. Ny sasany novolavolaina fanomezana dia manome ny loharanom-bola ho an'ny mpanome. Mianara bebe kokoa momba ny fanolorana eto.
Ny trangam-pandaminana iray efa nomanina natao dia rehefa mifidy ny handao ny ampahany amin'ny toerany amin'ny sekoly amin'ny sitrapo iray ny alumnus na alimina. Mety ho fanomezana vola, vola, na fananana mihitsy aza izany. Raha mikasa ny hampiditra ny alma ianao ao amin'ny sitraponao, dia tsara foana ny mandrindra ny antsipiriany amin'ny birao fampandrosoana any am-pianarana. Amin'izany fomba izany, afaka manampy anao amin'ny fandaharana izy ireo ary miomana hanaiky ny fanomezam-pahasoavana amin'ny ho avy. Sekoly kely kely any Virginie, Chatham Hall, no mpandray tombony toy izany. Rehefa maty ny alomina Elizabeth Beckwith Nilsen, kilasy tamin'ny taona 1931, dia nandany fanomezana 31 tapitrisa avy tany an-tranony izy tany amin'ny sekoly. Io no fanomezana lehibe indrindra nataon'izy ireo tany amin'ny sekoly tsy miankina rehetra.
Araka ny Dr. Gary Fountain, ny Rector sy ny Sekolin'ny Sekoly ao Chatham Hall tamin'io fotoana io (nanambara ampahibemaso tamin'ny 2009 ny fanomezam-pahasoavana), "ny fanomezam-boninahitra Ramatoa Nilsen dia fanovana ho an'ny Sekoly. vehivavy manohana ny fampianarana ny zazavavy . "
Ramatoa Nilsen dia nibaiko fa ny fanomezam-pahasoavana dia hapetraka ao anaty fonosim-bola tsy misy fepetra tsy misy fepetra, izay midika fa tsy misy fetrany ny fampiasana ny fanomezana. Ny famatsiana vola sasany dia voafetra; Ohatra, ny mpamatsy iray dia afaka milaza fa ny vola dia ampiasaina mba hanohanana ny lafiny iray amin'ny hetsika ataon'ny sekoly, toy ny fanampiana ara-bola, ny atletisma, ny zavakanto, na ny fanamafisana ny fahaiza-manao.
Zava-dehibe ny antony tokony hiheveranao ny sekoly tsy miankina
Mampirisika ny fahasamihafan'ny kolontsaina ao amin'ny sekolinao
5 Fanontaniana ifanakalozan-kevitra amin'ny sekoly fianarana manokana
Taom-pianarana taona Gap: Taonan'ny Fianarana Taom-pianarana Taona
Inona no tadiavin'ny komity misahana ny adiresy any am-pianarana?
Fantatrao ve Raha Mandeha Mianatra Ny Tranombarotra Fanateran-Dàlana sy 90 Mahita Fahaiza-mihira?
Uniforms amin'ny sekoly tsy miankina sy kodiarana
Ny maha-samihafa ny zon'ny mpianatra ao amin'ny sekoly tsy miankina
PKa Famaritana ao amin'ny Chemistry
Ireo tarehimarika sy tarehimarika momba ny Pikaia Prehistorique
Ny fomba hahatonga azy ho olana mahomby
Fomba hahitana loharano azo antoka
Famerenana fanamelohana miaraka amin'ny teny tsy voahevitra
Ny fototry ny sakafo ho an'ny fambolena
3 Zava-dehibe ny toerana misy ny tokantranonao
Fantaro ny fomba hanohanana ny penina sy ny fonosana
Ny fototry ny soritry ny taovam-pambolena, Fizarana II
1968 Mpilalao Championnatitry ny Lalao Olaimpika Peggy Fleming
Atsaharo ny valin-drano rava
Fanangonana varahina, fananana, ary fampitahana amin'ny Bronze
Adi-tenin'ny Street Street - Firaketana iraika ambin'ny folo
Fahatakarana ny tanjona sy ny dikan'ny volana Ghost ao Shina
Harris Matrix - Fitaovana famandrihana ny ela momba ny arakolojia
Sampan-draharahan'ny Governemanta Amerikana
Dia Diamond ve Ianao?
Manana fiara na SUV ve ny Kia Soul?
Satin tao amin'ny trano fahasivy
Ahoana ny fomba hanatsarana ny lalao fandaharana haingana
Nymphs amin'ny angano grika
Alexander Fleming dia nahita penicillin
Topy ny ady an-trano ady lehibe 13 tamin'ny fotoana rehetra
Mano Destra amin'ny fampianaran'ny mozika piano
Jaikara voafaritra: Ireo mpankafy ny sikhism
Fampandrenesana ny teoria anoratana